Mooshinkii Ka Dhanka Ahaa Wasiiradii Xukuumaddii Saacid Oo Fashilmay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mooshinkii Ka Dhanka Ahaa Wasiiradii Xukuumaddii Saacid Oo Fashilmay
Muqdisho, Mareeg.com: Mooshinkii ka dhanka ahaa wasiiradii ku jiray xukuumaddii Saacid ayaa fashilmay kadib markii laga korkeenay mooshin ka horjeeda, taasoo keentay in labada mooshin cod loo qaado.
Markii manta baarlamaanku isugu yimid kulankii uu codka ugu qaadi lahaa in wasiiradii Saacid ka mid noqon karaan xukuumadda cusub iyo inkale ayaa 12 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka waxey soo gudbiyeen mooshinka kazoo horjeeday kii hore.
12 –ka xildhibaan ayaa soo jeediyey mooshin ku saabsan in xubnaha wasiiradii Saacid ka mid noqon karaan xukuumadda cusub, waxeyna codsadeen in arrintaas baarlamaanka ka dodo codna u qaado.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari ayaa sheegay in cod loo kala qaado labadaas mooshin waxaana codka oo ahaa mid hal dheeri ah waxaa 113 xildhibaan ay u codeysay mooshinkii ka soo horjeeday kii horay u yaalay, halka 99 xildhibaan ay u codeysay Mooshinkii la xiriiray in aanay Wasiiradii hore dib u soo laaban, halka 6 xildhibaan ay ka aamustay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud iyo xubnaha wasiirada ah ee la doonayey in xukuumadda loo diido ayaa dedaal xoog leh u galay sidii mooshinka wasiiradii Saacid ka dhanka ahaa u fashilmi lahaa, taasoo ay ku guuleyteen.